पापाचारी अजामिल एक नामले गए बिष्णुको धाम
२०७७ असोज १२ सोमबार, अजामिलको जन्म कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुलका भएको थियो । उनि कर्मकाण्डी ब्राह्मण थिए । एक दिन उनले गाँउबाट बजार गइरहेको बेला एक नर्तकी देख्छन् । नर्तकीलाई अजामिलले आफ्नो घरमा ल्याउछन् । ... बाँकी अंश»
सरकार डा. गोविन्द केसीलाई बचाउने जिम्मा कसको ?
२०७७ असोज १२ सोमबार, पाका उमेरका डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर भइरहेको छ । सरकारले भने उनको गम्भीर स्वास्थ्यप्रति कुनै गाम्भीर्यता देखाएको छैन । ... बाँकी अंश»
सोमबार शिवजीको पूजा, यस्तो हुनेछ दिन
२०७७ असोज १२ सोमबार, सौरमान अनुसार आज अधिक आश्विनशुक्लको द्धादशी तिथि रहनेछ । आज धनिष्ठा नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा धृति, करणमा बब आनन्दादि योगमा शुभ रहनेछ । सूर्य कन्या राशिमा, चन्द्रमा मकर राशिमा रहनेछ । आज दिनमान २९ घटि ५० पलाको रहनेछ । ... बाँकी अंश»
जब सीताले रामको चर्चा सुनेर शुकीलाई बनाइन् बन्दी
२०७७ असोज ११ आइतबार, सीताले भनिन् -' तिमिले मलाई डर-धम्की देखाए पनि म तिमिलाई छोड्नेछैन ।' तब शुकीने क्रोध र दुःखमा व्याकुल भएर जानकीजीलाई श्राप दिइन् -' जस प्रकार तिमि मलाई यस समय आफ्नो पतिसँग वियोग गरिरहेकी छौ , त्यसरी नै तिमि स्वयं पनि गर्भिणी- अवस्थामा श्रीरामसँग अलग हुनु पर्नेछ ।' यो भनेर पतिवियोगको शोकमा उनले प्राण त्याग दिन् । उनले श्रीरामको स्मरण तथा पुनः पुनः राम-नामका उच्चारण गर्दै प्राण त्याग गरेकी थिइन् , यसकारण उनलाई लानलाई सुन्दर विमान आयो र ती शुकी त्यसमाथि बसेर भगवानको धाममा गइन् । ... बाँकी अंश»
यस्तो हुनेछ पञ्चाङ्ग अनुसार आइतबारको दिन
२०७७ असोज ११ आइतबार, आज श्रवण नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा सुकर्म, करणमा वणिज आनन्दादि योगमा गद रहनेछ । सूर्य कन्या राशिमा, चन्द्रमा मकर राशिमा रहनेछ । आज दिनमान २९ घटि ५४ पलाको रहनेछ । ... बाँकी अंश»
कोरोना जितेँ, समाजसँग हारें
२०७७ असोज १० शनिबार, असोज ८ गते संक्रमणमुक्त भएपछि म मोलुङ गाउँपालिका १ स्थित घरमा होम क्वारेन्टाइनमा छु । कोरोना जितेकोमा खुसी त अवश्य लागेको छ नै, तर समाजसँग भने म हारेअनुभुती गरेको छु । ओखलढुंगामा भर्खर मात्रै अलि बढी संख्यामा कोरोना देखिएको हो । त्यसैले कोरोना संक्रिमतलाई गर्ने व्यवहार बदलिएको छैन । केही साथीहरूले मसँग जोडेर फलानो यो पसलमा चिया खान्थ्यो, फलानोसँग साँठगाँठ थियो त्यसलाई कोरोना छ भनेर हिँडिरहेका छन् भन्ने सुन्छु । मनमनै हाँस्छु । किनकि म यो समाजले गर्ने व्यवहार पहिले नै अनुमान गरिसकेको थिएँ । जे अनुमान गरेको थिएँ त्यही अहिले भइरहेको छ । ... बाँकी अंश»